Galaxy J2 2018: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှင့်ပေါက်ကြားမှု | Androidsis
မကြာသေးမီကငါသိ၏ က Galaxy A8 နှင့် A8 Plus အသစ်ကိုကြေညာ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏ထုတ်ကုန်အသစ်နှစ်ခု။ သူတို့နှင့်အတူမီဒီယာများစွာကလည်း၎င်းတို့လည်းဖော်ပြခဲ့သည် Galaxy J2 2018 ကိုတင်ပြမည်။ မဖြစ်ပျက်တဲ့အရာ ဒါပေမယ့်၊ ဒီကိရိယာကိုသိဖို့အချိန်သိပ်မစောင့်ရသေးပါ။ သူတို့ရှိသည်ကတည်းက သင့်ရဲ့အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြား.
ဒီပစ္စည်းကိုဇန်န ၀ ါရီလတစ်လျှောက်လုံးမှာတရားဝင်တင်ဆက်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာတွေအကုန်လုံးကိုရှာတွေ့ဖို့ဒီလောက်ကြာကြာစောင့်နေစရာမလိုပါဘူး။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုလူသိများပြီးစျေးကွက်သို့မည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
Galaxy J2 2018 သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လျှို့ဝှက်ချက်များမရှိတော့ပါ။ ထင်ရှားပေါ်လွင်သောပထမအချက်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ရွေးရန်ဖြစ်သည် မိသားစုဒီဇိုင်း ဒီဖုန်းပေါ်မှာ ၎င်းသဘောမျိုးဖြင့်အသစ်အဆန်းကိုတွေ့ရခဲသည်။ ဒါကြောင့် Samsung ကစွန့်စားမှုမလုပ်ချင်ဘူး။ သူတို့ကဤကိစ္စတွင်လူသိများသည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအရသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
operating system ကိုAndroid 7.1.1 Nougat သုံးထားပါတယ်
စိတ်ကြိုက်အလွှာ: Samsung အတွေ့အကြုံ
ဖန်သားပြင်: ၅ လက်မအရွယ် qHD SuperAMOLED Resolution ရှိပြီး5x 960 Pixels
Processor ကို: 425GHz Quad Core Snapdragon 1,4
ရမ်: 1,5 GB ကို
ဘက်ထရီ: 2.600 mAh ဘက်ထရီ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနည်းနည်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်ပါသည်သူတို့တစ်တွေအနိမ့်အဆုံး device ကိုခံထိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီစက်ပစ္စည်းကနေသင်အများကြီးမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ ကောင်းမွန်သောပရိုဆက်ဆာနှင့်လျောက်ပတ်သောကင်မရာများရှိသည့်အလုပ်လုပ်သည့်ဖုန်းကိုလိုချင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ သင်ဘယ်တော့မှသိမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ Galaxy J2 2018 ကောင်းပြီရောင်းမည်.
ဤကိရိယာသည်စျေးကွက်အတွင်းကျရောက်မည့်နေ့ရက်အတိအကျကိုမသိပါ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုဇန်နဝါရီလတွင်ဖြန့်ချိမည်ဆိုပါကဇန်နဝါရီလမှဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် Samsung ကဒီအကြောင်းကိုထပ်မံအတည်ပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ရှိမည့်စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒီ Galaxy J2 2018 ၏စျေးနှုန်းသည် ၁၁၅ ယူရိုဖြစ်သည်. ဒီဆမ်ဆောင်းစက်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Galaxy J2 2018 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်